Marine Collagen Tri Petide (5000) mg (Shot Drink)6bottles – SUNNY eSTORE
Marine Collagen Tri Petide (5000) mg ...
Marine Collagen Tri Petide (5000) mg (Shot Drink)6bottles
No more fine line and wrinkle
with CoQ10 to protect free radical from UV
Collagen ဆိုတာဘာကိုဆိုလိုပါသလဲ? ဘာကြောင့် Collagen ကိုဖြည့်စွက်စာအနေနဲ့သောက်သုံးရပါသလဲ? Collagen ကိုဘယ်အသက်အရွယ်မှာ စတင်သောက်သုံးရပြီး ဘယ်အချိန်သောက်ရင်အကောင်းဆုံးပါသလဲ?
Collagen ဆိုတာကတော့ ကိုယ်ခန္ဓာကနေ ထုတ်လုပ်ပေးပြီးသား Protein Type တမျိုးပါ။ အသက်အရွယ်ရလာတဲ့အခါ ထုတ်လုပ်မှု Level ကျဆင်းလာတဲ့အတွက် အသားအရေလျော့တွဲခြင်း၊ အရေးအကြောင်းထင်လာခြင်း၊ ကိုယ်တွင်းအဂါင်္မကောင်းမွန်ခြင်းနှင့် အသားအရေပျက်စီးဖို့လွယ်ကူခြင်းတို့ကို ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အသားအရေတင်းရင်းနုပျိုစိုပြေလှပစေရန်အတွက် Collagen ကိုဖြည့်စွက်စာအနေနဲ့သောက်သုံးသင့်ပါတယ်။
Collagen အမျိုးအစားများစွာထဲမှ Japan နိုင်ငံရေနက်ပိုင်းသတ္တဝါများမှထုတ်လုပ်သော Marine Collagen က Quality အကောင်းဆုံးဖြစ်ပြီး Tripeptide နည်းစနစ်ဖြင့်ပြုလုပ်သော Collagen များသည်ကိုယ်တွင်းပျော်ဝင်မှုအားကောင်းသဖြင့် ပိုမိုထိရောက်မှုရှိပါတယ်။ Vistra မှထုတ်လုပ်သော Collagen သည် Marine Collagen Tripeptide ဖြစ်တဲ့အတွက် Quality အကောင်းဆုံး Collagen ဖြစ်ကြောင်းအာမခံပါသည်။
အသက် ၂၁ ကျော်မှစတင်သောက်သုံးန်ိုင်ပြီး အစာရှင်းချိန်သောက်သုံးပါက ပိုမိုထိရောက်မှုရှိပါတယ်။ Protein Type ဖြစ်တဲ့အတွက်အစာအိမ်ထိခိုက်မှုလုံးဝမဖြစ်စေပါ။
ယခုအခါတွင် အသက်ငယ်ပိုင်းမှ အသက်ကြီးပိုင်းအထိ သင့်တော်သော mg ပါဝင်မှုများကို သေချာထုတ်လုပ်ထားပါတယ်။